Ipob-Police Clash: A machiela ndị otu mmonwu n'Oraifite maka ogbugbu ndị uweojii - BBC News Ìgbò
A machiela ndị otu mmọnwụ n'Oraifite maka ogbugbu ndị uweojii
4 Dec 2019 16:304 Dec 2019 16:30
Oraifite tọgbọọ chakoo
Amachiela otu mmonwu n'Oraifite
Ndị uweojii sị anya hụrụ Ifeanyi Ejiofor gbara ha ama
Ndị uweojii ewepụtala aha ndi otu ha egburu
Nke Uche Akolisa
Ebisara na 8:36 5 Disemba 20198:36 5 Disemba 2019
Oraifite dị chakoo n'mgbede ụnyaahụ
Okporoụzọ adịbeghị ka ọ na adịbu n'Oraifite.
Ebisara na 7:34 5 Disemba 20197:34 5 Disemba 2019
Oraifite amachiela ndị Ipob na ndị mmọnwụ
Ndị Oraifite amachiela emume ndị mmọnwụ isii na ndị Ipob na be ha.
Nke a na-abịa dịka egburu ndị uweojii abụọ n’ọgbaghara dara n’etiti ndị Ipob na ndị uweojii na be Ọkaiwu Ifeanyi Ejiofor.
Dịka ndị Oraifite siri kọwa, ọgbaghara a pụtara dịka ndị otu mmọnwụ abụọ malitere isi okwu ebe a na-akwa ozu.
Ọ bụ ndị Oraifite Improvement Union (OIU) kwuru nke a n’Ọka ụbọchị Wednesde.
Ndị mmọnwụa amachiri bụ Otu-Eke, Otu-Afọ, Otu-Orie, Otu-Ube na Otu-Ayaka.
Offor Uche bụ onyeisi OIU na Igwe Oraifite bụ Daniel Udeoji binyere aka n’ozi a.
Ozi ha sị: “Ndi na-achị Oraifite agaghị agba nkịtị ka ndị omekome nara anyị obodo anyị ma mebie aha anyị,
“Ihe mere n’ụbọchị abụọ nke ọnwa Dicemba abụghị usoro njirimara Oraifite.”
Ebisara na 5:23 5 Disemba 20195:23 5 Disemba 2019
Anyi ka na-etinyekwe anya n'ihe mere na Oraifite.
Ka taa na-aga, anyị ga na-ewetere unu ihe ọhụru pụtara na ya bụ okwu.
Ebisara na 20:35 4 Disemba 201920:35 4 Disemba 2019
Na mbụ ...
Na mbido, ndị uweojii kwuru na ha nwetara mkpesa megidere Ọkaiwu Ifeanyị Ejiofor, kpọọ ya oku, ọ zaghị ha, ha gaa n'ụlọ mana ndị Ipob luso ha ọgụ, gbuo mmadụ abụọ ndị otu ha.
Ha gara n'ihu rịọ onye ọbụla hụụ Ejiofor ka ọ gbara ha ama.
Ifeanyị Ejiofor- Facebook/NPFCopyright: Ifeanyị Ejiofor- Facebook/NPF
John Abang: Onye hụrụ Ejiofor gbara anyị amaImage caption: John Abang: Onye hụrụ Ejiofor gbara anyị ama
Mana Ipob gọrọ si na onweghị ozi ọkaiwu ha natara, kama na ndị uweojii wakporo ụlọ Ejiofor, sunye ya ọkụ gbagbuo ọtụtụ mmadụ nkiti enweghị ngwa ọgụ ha ji suo ụgbọala na ozu ndị ahụ ọkụ iji mee ka a ghara inwe ihe aka ebe.
Lee akụkọ ihe merela kemgbe ahụ: https://www.bbc.com/igbo/afirika-50631291
Ebisara na 20:20 4 Disemba 201920:20 4 Disemba 2019
'Ihe mere na m ewetaghị ihe onyonyo ihe mere n'ụlọ ọkaiwu Ipob'
Onye ntaakụkọ BBC igbo gara ebe ihe mere bụ Ebere Ekeopara kwuru na obodo bụ igwe n'ebe Ifeanyị Ejiofor oge o ruru nso ebe ha nke mere ka ọgbaa ọsọ ndụ.
Gee ihe okwuru n'ọnụ ya:
Ebisara na 20:06 4 Disemba 201920:06 4 Disemba 2019
Gọọmenti Anambara ekwughị pim
Dịka o merela abalị atọ ọgbaaghara dapụtara n’etiti ndị uweojii na ndị otu IPOB n’Oraifite, Gọọmentị Anambra Steeti ekwubeghị pịm.
Otu onye welitere isi na gọọmentị Anambra gwara BBC na ha ka na-eche ka ndị uweojii, ndị ọgbakọ Obodo na Igwe ndị Oraifite kọwaara ha ihe merenu nke ọma tupu ha ekwuo ihe ọbụla maka ọdachi ahụ tarala isi mmadụ.
Willie Obiano/TwitterCopyright: Willie Obiano/Twitter
Ebisara na 19:14 4 Disemba 201919:14 4 Disemba 2019
Ọ bụ ọgụ dara n'etịtị ndị otu mmọnwụ butere ụka- Ndị ndu Ọraifite
Ndị ndu obodo Ọraifite ekwuola na ọ bụ nghọtahie dị n'etiti otu mmọnwụ butere ọgbaghara dapụtara n'Oraifite n'ụbọchị Monde.
Cheta na ndị mmadụ gụnyere ndị uweojii abụọ nwụrụ dịka ndị Ipob na ndị uweojii kwatara oge ndị uweojii wakporo ụlọ ọkaiwu otu Ipob bụ Ifeanyị Ejiofor maka ebubo imaja na ịtọrọ mmadu.
Mana ndị ndu obodo ahụ gụnyere Sunny Igboanuzue bụ President-General Oraifite Improvement Union, odeakwụkwọ ya bụ Offor Uche, na eze obodo ha bụ Igwe Daniel Udeoji kwuru na ọ bụ ndị mmọnwụ mere ede jiri bee nwịị.
N'akwụkwọ ozi ha wepụtara dịka ha na ndị ntaakụkọ nwere mkparịtaụka n'Ọka ụbọchị Wenezde, ha katọọ ọ ogbugbu e gburu ndị uwe ojii ma kwuo na ha agaghị agba nkịtị ndị omekeome a na-akpa ike n'ala ha.
Ha gara n'ihu machie otu mmọnwụ isii maka ibute ọgbaghara n'obodo ahụ.
Otu mmọnwụ ihe ndị megidere bụ; Otu-Afor, Otu-wo, Otu-Orie and Out-Ube, Otu Ayaka na mmọnwụ ọbụla na-agba n'abalị.
Ebisara na 18:03 4 Disemba 201918:03 4 Disemba 2019
Ihe onye ntaakụkọ anyị ji anya ya hụ
Kemgbe Monde ka Oraifite na-enwu ọkụ dịka ndị uweojii na ndị Ipob kwadara oge ndị uweojii wakporo ụlọ ọkaiwu otu Ipob.
Lee ihe onye ntaakụkọ BBC hụrụ n'obodo ahụ ka ọ gara ya ụbọchị Wenezde:
Video caption: Ipob-Police clash: Oraifite tọgbọọ chakooIpob-Police clash: Oraifite tọgbọọ chakoo
Ebisara na 17:28 4 Disemba 201917:28 4 Disemba 2019
Ụkwụ apụọla ndị Oraifite ọsọ
Ebe niile tọgbọọ chakoo n'ỌraifiteImage caption: Ebe niile tọgbọọ chakoo n'Ọraifite
Oke n'ọsọ ngwere n'ụzọ n'Obodo Oraifite , Anambara steeti dịka ọgbaghara dara n'etiti ndị uweojii na ndị otu Ipob na-aga n'ihu taa bụ Wenezde.
Onye ntaakụkọ anyị gara ebe ahụ kọwara na ọ bụ naani ụmụ nwaanyị nọzị n'ụzọ nakwa n'ahịa Nkwọ Oraifite azụ ahịa n'ihi egwu na ndị uwe ojii ga-abịa bọrọ ọbọ maka ndị otu ha nwụrụ anwụ.
Ka ọ dị ụgbua, ebe niile n'Oraifite juru oyi.
Mgbe BBC rutere n' ụlọ Igwe Oraifite bụ Daniel Udoji, o nweghị onye anyị hụrụ n'ụlọ ya.
Mbọ niile anyị gbara la anyị gaa n'ụlọ Ifeanyi Ejiofor ebe ya bụ mkpa mkpa nọrọ kpaa amịtaghị mkpụrụ n'ihi na Obodo ka nọ na katakata.
Ebisara na 17:27 4 Disemba 201917:27 4 Disemba 2019
Ndewoo ndị be anyị!
Nke onye chiri ya zere!
Sonyere anyị maka iwetara ụnụ nke na ebe kemgbe nsogbu dapụtara n'etiti ndị uweojii na Ndị Ipob n'Oraifite,Anambara steeti